तपाईको जीवन र तपाईको वरपरको संसारमा शान्ति निर्माण गर्ने १० व्यावहारिक तरिकाहरू - ग्लोबल अभियान अफ पीस शिक्षाका लागि
तपाईको जीवन र तपाईको वरपरको संसारमा शान्ति निर्माण गर्न १० व्यावहारिक तरिकाहरू
मार्च 13, 2020 राय 3
अनस्प्लासमा मट्टेओ पगनेल्लीद्वारा फोटो
(बाट पोस्ट गरिएको: टेलर O'Connor। मध्यम, मार्च १०, २०२०)
टेलर O'Connor द्वारा
"आफैलाई सोध्नुहोस् कि तपाईं फरक पार्न के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यो कार्य लिनुहोस्, जतिसुकै ठूलो होस् वा सानो।" - ग्रिया माचेल
त्यहाँ धेरै मानिसहरु छन् जो केहि सामाजिक मुद्दा (वा मुद्दाहरु) को बारे मा गहिरो चासो राख्छन्, तर निश्चित छैन तिनीहरू फरक पार्न के गर्न सक्छन्। हामी मध्ये धेरैलाई, हामी कसरी मद्दत गर्न सक्दछौं भनेर जान्न गाह्रो छ। यो भ्रामक हुन सजिलो छ, र सायद उदासिन।
प्रणाली र संरचनाहरू जुन संसारले शासन गर्दछ काम गरिरहेको छैन। त्यहाँ युद्ध र गरीबी छ। त्यहाँ भेदभाव, असमानता, र हिंसा छ। मुद्दाहरू ठूला छन्। तिनीहरू जटिल छन्। यो भारी हुन सक्छ।
शुभ समाचार यो हो कि सबैले भिन्नता ल्याउन केहि गर्न सक्छन्। हो, समस्याहरू जटिल छन्, तर परिवर्तन गर्न प्रभावकारी हुनको लागि समाधानहरू सरल हुनुपर्दछ। मलाई आशा छ कि तल साझेदारी गरिएका विचारहरूले तपाईंलाई र अरू धेरैलाई शान्ति र न्यायको लागि केहि कदम चाल्न प्रेरित गर्नेछ, चाहे ठूलो होस् वा सानो।
तपाईंको जीवन र तपाईंको वरिपरिको विश्वमा कसरी शान्ति निर्माण गर्ने
विश्वव्यापी शान्ति निर्माणकर्ताहरूसँग मिलेर मेरो व्यक्तिगत अनुभवहरूको आधारमा, यहाँ १० चीजहरूको सूची छ जुन तपाईं अझ शान्त र न्यायपूर्ण संसार निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ।
१. आफ्नो दिमाग शान्त गर्नुहोस्
शान्तिको लागि अनुभवी अधिवक्ता वा परिवर्तन गर्न चाहने युवा व्यक्ति, आफैंबाट सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईको दिमागलाई शान्त पार्नाले तपाईलाई अरु बिरामी बन्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै आवश्यक पर्नेहरूका लागि उपस्थित हुन मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंलाई चुनौतीपूर्ण व्यक्तिहरूसँग संलग्न हुन मद्दत गर्दछ। यसले तपाईको अन्तर्ज्ञानलाई सजिलो बनाउँछ। यसले तपाईंलाई क्रोध र अन्य कडा भावनाहरूको मध्यम भावनाहरू उत्पन्न गर्न अनुमति दिनेछ जब तिनीहरू देखा पर्दछन्। यो द्वन्द्व र असमानता संग सम्बन्धित जटिल मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्न तपाईलाई अन्तर्दृष्टि दिनेछ। यसले तपाईंलाई शान्ति निर्माणको लागि तपाईंको प्रयासमा बढी केन्द्रित र रचनात्मक हुन मद्दत गर्दछ।
यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईले आफ्नो दिमागलाई शान्त पार्न सक्नुहुन्छ। सरल mindfulness अभ्यासहरू सिक्नुहोस्। शान्त समयलाई अंगालो। आफ्ना भावनाहरू अवलोकन गर्नुहोस्। प्रकृतिमा समय खर्च गर्नुहोस्। तपाइँको मिडिया खपत को ध्यान दिनुहोस्। सास तपाइँको लागि काम गर्ने चिन्तनशील अभ्यासहरू खोज्नुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्।
२. तपाईंको जीवन सरल बनाउनुहोस्
सामान्य जीवन बिताउँदा तपाईंको दिमाग खाली हुनेछ। तपाईंसँग थोरै अलमल्याउनेताहरू छन् र तपाईको ख्याल गर्ने कुनै मुद्दा (वा मुद्दाहरू) लाई सम्बोधन गर्ने तरिकाहरू पत्ता लगाउन ध्यान दिन अझ सक्षम हुनुहुनेछ। यो तपाइँको मनसाय संग तपाइँको जीवन बिताउन मद्दत गर्दछ। र न्यूनतम जीवनशैलीको साथ तपाईं आफ्नो कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्नुहुनेछ। त्यो बोनस हो!
यहाँ केहि विचारहरु छन् जुन तपाईले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो सम्पत्ति न्यूनतम गर्नुहोस्। धेरै काम प्रतिबद्धताहरु लिनुहोस्। सामाजिक सments्लग्नताको लागि जान दिनुहोस् जुन तपाईंलाई अर्थपूर्ण छैन। जीवनमा साधारण चीजहरूको आनन्द लिनुहोस्। आफूलाई 'व्यस्त' हुनु पर्ने यो विचारबाट आफूलाई अलग गर्नुहोस्। शारीरिक र मानसिक अव्यवस्था कम गर्नुहोस्, अलमल्याउने कुरा झर्नुहोस्, र तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण केमा केन्द्रित गर्नुहोस्।
Yourself. अन्याय र असमानता र शान्तिको बारेमा आफैलाई सिकाउनुहोस् (र अरुलाई सिकाउनुहोस्)।
अन्याय र असमानता उत्पन्न गर्ने प्रणालीहरू सर्वसाधारणको लागि अदृश्य रहने तिनीहरूको क्षमतामा निर्भर हुन्छन्। अन्याय र असमानताले प्रत्यक्ष रूपमा चित्त दुखाउने मानिसहरूलाई यी चीजहरू बुझ्न अक्सर गाह्रो हुन्छ, आफ्नो अस्तित्वलाई एक्लै छोडिदिनुहोस्। वास्तवमै अझ न्यायपूर्ण र समान समाज निर्माण गर्न हामीले यी मुद्दालाई मूलधारमा ल्याउनु पर्छ।
अन्याय र असमानता, र तिनीहरूको ऐतिहासिक विरासत उत्पादन गर्ने संरचनाहरूको बारेमा आफूलाई शिक्षित गर्नुहोस्। न्याय र समानताको लागि ऐतिहासिक संघर्षहरूको बारेमा, सामाजिक आन्दोलनहरूको बारेमा, प्रगति भएको महत्वपूर्ण घटनाहरूको बारेमा र वास्तविक नायकहरूको बारेमा सिक्नुहोस्। कार्यको लागि रचनात्मक र रणनीतिक विचार उत्पन्न गर्न यो ज्ञानको प्रयोग गर्नुहोस्। अरूलाई सिकाउनुहोस् र परिवर्तनलाई प्रेरित गर्नुहोस्।
Peace. शान्तितर्फ आफ्नो व्यावसायिक जीवनलाई अभिमुखीत गर्नुहोस्
के तपाईं शिक्षक हो? के तपाईं आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई आलोचनात्मक रूपमा युद्ध, द्वन्द्व र असमानताको विश्लेषण गर्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ? के तपाई स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ? तपाई स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई अझ सजिलो बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाई एक पुलिस अफिसर हुनुहुन्छ? तपाईको विभागले कसरी सामान्य पुलिस अभ्यासको हानिकारक प्रभावहरु लाई सम्बोधन गरिरहेको छ? के तपाई एक उद्यमी हुनुहुन्छ? के तपाइँ सामाजिक कौशललाई सम्बोधन गर्न तपाइँको सीपहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाई विश्वव्यापी सहायता उद्योगमा काम गर्दै हुनुहुन्छ? तपाइँ सहायतालाई डिकोलोनाइज गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ?
तपाईंको कामले अन्याय र असमानतामा योगदान पुर्‍याउने तरिकाहरू वा शान्ति र न्यायमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने सम्भावनाहरू विचार गर्नुहोस्। कुन सामाजिक मुद्दाहरूलाई तपाईले धेरै ख्याल गर्नुहुन्छ भनेर स्पष्ट गर्नुहोस्। प्रतिबिम्बित गर्न समय खर्च गर्नुहोस् र तपाईंको कार्य र व्यावसायिक जीवनमा यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने तरिकाहरू पत्ता लगाउनुहोस्। परिवर्तन गर्न अवसरहरू खोज्नुहोस्, वा नयाँ सिर्जना गर्नुहोस्। व्यावहारिक कार्यहरू प्रत्येक पेशा प्रकारको लागि अद्वितीय हुनेछ।
Inter. पारस्परिक द्वन्द्व परिवर्तन गर्नुहोस्
यदि तपाईं शान्ति निर्माण गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं पारस्परिक द्वन्द्व परिवर्तन गर्नमा दक्ष हुनुपर्छ। सिद्धान्तमा, सम्बन्धमा द्वन्द्वको रूपान्तरणले सबैलाई खुशी, अझ बढी पूर्ति गर्ने (शान्तिमय) जीवन बाच्न अनुमति दिन्छ। एकै साथ परिवर्तन गर्न काम गर्नु तनावपूर्ण हुन सक्छ र तपाईको टोलीमा रहेका व्यक्तिहरूसँग तपाईको विरोधाभास हुन सक्छ जसको अगाडि बढ्ने बारेमा बिभिन्न विचारहरू छन्। साथै, जब अन्याय र असमानताको नींवहरू हल्लाउँदै, तपाईं निश्चित रूपमा द्वन्द्वमा पर्नुहुनेछ जो व्यक्तिबाट लाभान्वित हुन्छन्। त्यसोभए तपाईले यी सम्बन्धहरु लाई रूपान्तरण गर्न रचनात्मक रुपमा संलग्न हुनका लागि राम्रोसँग तयार हुनुपर्दछ, शान्ति निर्माणको लागि तपाइँको प्रयासलाई रोक्न सक्नुहुन्छ।
जब तपाईं अन्तर्विवादात्मक द्वन्द्वहरू सामना गर्नुहुन्छ, तपाईं प्रत्यक्ष रूपमा सम्मिलित हुनुहुन्छ वा यदि तपाईं तेस्रो पक्ष हुनुहुन्छ भने, उनीहरूलाई संघर्षको प्रबन्ध गर्ने क्षमता विकास गर्ने अवसरको रूपमा लिनुहोस्। यी सम्बन्धहरूलाई रूपान्तरण गर्न, विपक्षीहरूलाई तपाईंको सहयोगी बनाउन, र साझा चासोको विषयहरूमा मिलेर काम गर्ने कडा, सहयोगी टोलीहरू निर्माण गर्न प्रविधिहरू विकास गर्नुहोस्। सुन्न र संचार कौशल विकास र अभ्यास गर्नुहोस्। रचनात्मक वार्तालाप खोल्नको लागि तरिकाहरू सिक्नुहोस्। एक द्वन्द्व मध्यस्थता गर्नुहोस्। विश्वास निर्माण गर्ने तरिकाहरू खोज्नुहोस्। साधारण जमीनको लागि खोजी गर्नुहोस्। क्षमा, चिकित्सा, र मेलमिलापको लागि अवसरहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
Community. समुदाय रिक्त स्थान परिवर्तन गर्नुहोस्; वा तिनीहरूलाई शान्ति शिक्षा र कार्यको लागि प्रयोग गर्नुहोस्
समुदाय रिक्त स्थानलाई रूपान्तरण गर्नु भनेको शान्ति र न्याय निर्माण गर्न अद्वितीय, प्राय: बेवास्ता गरिएको तरीका हो। हामी अक्सर बेवास्ता गर्दछौं कि कसरी सामुदायिक स्थानले असमानतामा योगदान पुर्‍याउँछ र युद्ध संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ। तपाईंको शहरमा मानिस कसरी विभाजित छन्? के तपाईको शहरमा अल्पसंख्यक समुदायहरू छुट्टिनुको इतिहास छ? के केहि समुदायमा राम्रो विद्यालय वा स्वास्थ्य सुविधा छ? पार्क र प्राकृतिक स्थानहरूमा कसको पहुँच छ? कुन टोलमा फोहोर सुविधा, बिजुली प्लान्ट र कारखाना छन्? संग्रहालयहरु र सांस्कृतिक साइटहरु कहाँ छन्? सार्वजनिक स्मारकको बारेमा के हुन्छ? के उनीहरूले युद्धको 'नायक' लाई महिमा दिन्छ वा उनीहरू शान्तिको प्रेरणा दिन्छन्?
यहाँ केहि विचारहरू छन् जुन तपाईले आफ्नो समुदायमा रिक्त स्थान परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा तिनीहरूलाई शान्ति शिक्षा र कार्यको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। संरक्षण, संरक्षण, र विविध सांस्कृतिक र ऐतिहासिक साइटहरूको प्रचार। समुदाय खाली ठाउँहरू पहुँचयोग्य, समावेशी, र परिवार-मैत्री बनाउनुहोस्। पार्क, प्लाजा, र पैदल मार्गहरूको पुनः दावी गर्नुहोस्। साझेदारी स्थानहरू सिर्जना गर्नुहोस्। शान्ति शिक्षाका लागि समुदाय खाली ठाउँहरू प्रयोग गर्नुहोस्। एक समुदाय कला परियोजना गर्नुहोस्। युद्ध 'नायक' र bigots गर्न स्मारकहरू हटाउनुहोस्। शान्ति नायकहरूलाई स्मारकहरू निर्माण गर्नुहोस्।
War. युद्ध, हिंसा, अन्याय र असमानताको गतिशीलता संग बन्ने संरचना परिवर्तन, वा स्रोत फिर्ता र युद्ध को लागी समर्थन।
संगठनको एक उच्च डिग्री र संसाधनहरूको अथाह मात्रा बिना युद्ध सम्भव छैन। यदि हामीले युद्धको अन्त्य गर्ने हो भने विदेशमा युद्ध र राज्यमा हिंसा सिर्जना गर्ने राज्यका संरचना र संस्थालाई रूपान्तरित गर्नुपर्दछ। पैसा र स्रोतहरू जुन युद्ध फीड हटाउनुपर्दछ। त्यस्तै असमानता र अन्याय सरकारी संस्था, सार्वजनिक नीति र आर्थिक प्रणालीको उत्पादन हो। अधिक न्यायसंगत र समान समाज निर्माण गर्न पर्याप्त संरचनात्मक र नीति परिवर्तन आवश्यक छ जुन हाम्रो समाजले कसरी सञ्चालन गर्दछ भन्ने आधारमा प्रहार गर्दछ।
यहाँ युद्ध, हिंसा, अन्याय र असमानताको गतिशीलता संग सम्बन्धित संरचना परिवर्तन गर्न केहि विचारहरु छन्। तपाईंको स्थिति र प्रभावको स्तरमा निर्भर गर्दै, तपाईंको कार्यहरू मतदानबाट, वकालत गर्न, प्रत्यक्ष नीति / संस्था सुधार गर्न सक्दछ। डिमिलिटराइज डिफेन्स र पोलिसि .्। शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि सेना र पुलिस प्रयोग गर्नुहोस्। Incisive आपराधिक न्याय सुधारका लागि परिचालन गर्नुहोस्। युद्धको लागि रकम बदल्नुहोस् र तिनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवाहरू, कूटनीति, शान्ति, कला, र संस्कृति को लागी विनियोजन गर्नुहोस्। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हतियारको उत्पादन र बिक्रीलाई नियमन गर्ने कानूनहरू बनाउनुहोस्। कम्पनीहरु, सरकारहरु, व्यक्तिहरु, र संस्थाहरुबाट डाईभस्ट गर्नुहोस् जुन युद्धबाट लाभ / प्रबर्धन गर्दछ। युद्धको लागि कर तिर्ने प्रतिरोध गर्नुहोस्।
War. युद्धलाई जायज ठहर्याउने र असमानतालाई युक्तिसंगत पार्ने आख्यानहरू विघटन गर्नुहोस्।
केटाकेटीहरूको रूपमा, हामी युद्धको महिमा हुने कथाहरूसहित भर्खरैको इतिहास सिक्छौं। हामी सिक्छौं कि हिंसा उचित छ, मर्यादित पनि। हामी युद्धका नायकहरू बाट प्रेरित हुन्छौं जुन हामीले ईतिहासको पुस्तकहरूमा पढ्छौं। हाम्रा धार्मिक नेताहरूले उनीहरूलाई आशिष् दिएर सेना प्रदान गर्छन्। राजनीतिक नेताहरूले झूट बोलेका छन जुन युद्धलाई जायज ठान्छ, र मिडिया आउटलेटहरूले इको चेम्बर प्रदान गर्छन्। त्यस्तै, यी संस्थाहरूले असमानताको असंख्य तर्कसंगत उत्पादन गर्दछ। ऐतिहासिक अन्याय र असमानता स्कूलहरूमा सफा गरिन्छ। हामी यस्तो भ्रम सिर्जना गर्दछौं कि मानिसहरू धनी र सफल हुन्छन् आफ्नै खण्डबाट मात्र। हामी विशाल असमानताहरूलाई अस्पष्ट पार्छौं जुन अरूको लागि प्रगतिमा बाधा निर्माण गर्ने क्रममा सफलताको लागि सजिलो मार्गहरू प्रदान गर्दछ। गरिब मानिसहरुलाई तिनीहरूको अवस्थाको लागि जिम्मेवार छ।
यी कथाहरू अवरूद्ध गर्नुपर्दछ। मानिसहरूलाई युद्धको वास्तविकता र असमानता उत्पन्न गर्ने प्रणालीहरूको बारेमा शिक्षित हुनुपर्दछ। यहाँ कार्यका लागि केहि विचारहरू छन्। विद्यालयहरूमा इतिहासको शिक्षालाई रूपान्तरण गर्नुहोस्। युद्ध प्रचार र हिंसालाई जायज ठहराउने मिथकहरूको बदनाम गर्नुहोस्। धम्कीहरूको खण्डन गर्नुहोस्। हिंसा जन्मजात छैन कि बुझाइ प्रचार गर्नुहोस्; युद्ध अपरिहार्य छैन। हिंसा युक्तिसंगत गर्ने भ्रष्ट नेताहरूको प्रेरणा र भ्रामक रणनीतिको पर्दाफाश गर्नुहोस्। राष्ट्रवादी विचारधारा र विभाजनको राजनीतिलाई डिक्रस्ट्रक्चर गर्नुहोस्। लडाई घृणायुक्त भाषण र मानवीय पछाडि परेका समूहहरु। भेदभावपूर्ण उद्देश्यका लागि धर्मको दुरुपयोगको बिरूद्ध बोल्नुहोस्, विशेष गरी तपाईंको आफ्नै समूह भित्र।
Music। शान्तिको लागि संगीत, कला र संस्कृतिको शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्
संगीत, कला, र संस्कृति परिवर्तन गर्न शक्तिशाली उपकरण हुन सक्छ। तिनीहरू हामीलाई प्रेरणा दिन सक्छन्। तिनीहरूले मानिसहरूलाई एकताबद्ध गर्न सक्छन्। तिनीहरू निको पार्न सक्छन्। तिनीहरूले हृदय र दिमाग बदल्न सक्छन्। तिनीहरूले हामीलाई चीजहरू बिभिन्न तरिकाहरूमा हेर्न मद्दत गर्न सक्दछन्। कला र संगीतमा असीम सम्भावना रहेको छ, र संस्कृतिको प्रयोगमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न। र सामाजिक मिडियाको साथ, सन्देशहरू छिटो फैलियो, र टाढा-टाढासम्म पुग्न सक्दछ।
यहाँ शान्ति र न्यायको लागि कला र संस्कृतिको शक्ति चलाउनको लागि केहि विचारहरू छन्। मुद्दाहरूको सचेतना जगाउन वा शान्तिमय फ्युचरको कल्पना गर्न संगीत, प्रदर्शन, कविता, हास्य वा कहानी कथाहरू प्रयोग गर्नुहोस्। नृत्य वा एक उद्देश्य को लागी शिल्प। अक्षरहरू र स्टोरीलाइनहरू निर्माण गर्नुहोस् जुन स्टिरियोटाइपहरू तोड्दछन्। मानिसहरूलाई एकसाथ विवादमा ल्याउन खेलहरू प्रयोग गर्नुहोस्। शान्ति, मानव अधिकार र सामाजिक न्याय को दिन मनाउनुहोस्। शान्ति कार्यहरूमा सांस्कृतिक प्रतिमा सम्मिलित गर्नुहोस्। सामेल हुनुहोस् वा सार्वजनिक प्रार्थना, ध्यान, वा शान्तिको लागि vigils सिर्जना गर्नुहोस्। शान्ति इमेजरी सिर्जना गर्नुहोस् वा प्रतीकहरूको पुनः कल्पना गर्नुहोस्। शान्ति वा सहनशीलता बढावा दिन संस्कारहरू सिर्जना गर्नुहोस् वा प्रयोग गर्नुहोस्। र सामाजिक सन्देशमा तपाईंको सन्देश विस्तार गर्न नबिर्सनुहोस्।
१०. शान्ति र न्यायका लागि संरचना (वा समर्थन) सिर्जना गर्नुहोस्
जब हाम्रो धेरै समय प्रणालीगत समस्याहरू परिवर्तन गर्न सling्घर्षमा व्यतीत हुन्छ, कहिलेकाँही हामीले लिन सक्ने उत्तम दृष्टिकोण भनेको शान्तिको लागि संरचनाहरू (वा अवस्थितहरूलाई समर्थन गर्न) हो। यो स्फूर्तिदायी हुन सक्छ किनकि यसले समस्याबाट समाधानलाई समाधानमा केन्द्रित गर्दछ। यसले शान्तिको लागि नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्दछ किनकि यसको प्रकृतिबाट शान्तिका लागि संरचनाले केही नयाँ सिर्जना गर्दैछ। यो समस्याको पीछा गर्दैन। यो नयाँ समाधान अन्वेषण गर्दैछ।
त्यहाँ धेरै प्रकारका समूहहरू वा संरचनाहरू छन् जुन तपाईंले सिर्जना गर्न वा समर्थन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ केहि विचारहरू छन्। एक समुदाय संगठन, गैर नाफा, वा सामाजिक उद्यम तपाईलाई महत्वपूर्ण मुद्दाहरु मा काम गरीरहेछन् शुरू गर्नुहोस् वा समर्थन गर्नुहोस्। हिंसा रिपोर्ट गर्न, रोक्न, वा प्रतिक्रिया दिन मेकानिजमेन्टहरू सिर्जना गर्नुहोस् वा समर्थन गर्नुहोस्। शान्ति र न्याय प्रबर्द्धन गर्न समर्पित सरकारी विभागहरूको निर्माण (वा अवस्थित कार्य) लाई समर्थन गर्नुहोस्। शान्तिको लागि प्लेटफर्म, फोरम, वा नेटवर्कहरू सिर्जना गर्नुहोस् वा सामिल हुनुहोस्। पोडकास्ट, ब्लग, एक ब्लग, वा अन्य अनलाइन प्लेटफर्महरू शान्तिका लागि सुरू गर्नुहोस्, वा तपाईंको लागि महत्वपूर्ण रहेको कुनै मुद्दामा निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
मलाई आशा छ कि यी विचारहरू तपाईंको लागि सहयोगी छ। व्यावहारिक कार्यहरूको बारेमा थप विचारहरूको लागि तपाईले वरपरको संसारमा शान्ति निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ, डाउनलोड गर्नुहोस् मेरो नि: शुल्क ह्यान्डआउट १ 198 Peace क्रान्तिका लागि कार्यहरू यहाँ.
# नागरिक क्रिया
# व्यक्तिगत परिवर्तन
शान्ति शिक्षा बेट्टी रीार्डनको साथ अन्तर्क्रियात्मक संवाद पोडकास्ट
स्थानीय समुदायको साथ सन्दर्भ-विशिष्ट शान्ति शिक्षा पहलहरूको विकास गर्दै: बोलिभियाबाट पाठ
पीसबिल्डिंगमा शिक्षाको भूमिका - एम्स्टर्डम प्रसारण घटना
अगस्ट 20, 2016 गतिविधि रिपोर्टहरू 0
शिक्षा र शान्ति निर्माणमा अनुसन्धान कन्सोर्टियमले एम्स्टर्डममा २०-२ 20 अप्रिल २०१ Peace को बीचमा "पीस निर्माणमा शिक्षाको भूमिका - फाउण्डेशन, फाउन्डर र फ्युचर" शीर्षकको एक प्रसारण कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
युएनएससीआर १ 1325२XNUMX लाई कार्यान्वयन गर्नेमा स्थानीय प्रशिक्षण प्रयास: पाठहरू सिकेका र उभरने सम्भावनाहरू
अप्रिल 16, 2017 समाचार र हाइलाइटहरू, अनुसन्धान 0
महिला शांति निर्माणकर्ताहरूको ग्लोबल नेटवर्कले महिला, शान्ति र सुरक्षाका मुद्दाहरूमा विश्वव्यापी नीति र स्थानीय कार्यहरूबीचको खाडल हटाउने प्रयासमा युएनएससीआर १ 1325२1820 र १ XNUMX२० को स्थानीयकरण कार्यक्रम आरम्भ गर्‍यो। यो नीति निर्माणको लागि एक जन-आधारित, तल्लो-अप दृष्टिकोण हो जुन कानूनको स्थानीय प्रयोगबाट पर जान्छ, किनकि यसले स्थानीय स्वामित्व सुनिश्चित गर्न स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरू र समुदाय-संचालित रणनीतिहरूको पign्क्तिबद्धता र समन्वयको ग्यारेन्टी गर्दछ। , समुदाय र नागरिक समाज संगठनहरू र सरकार बीचको सहभागिता र लिंकहरू। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
अलेक्जान्ड्रियामा कम्युनिटी कलेज शिक्षा शिक्षकहरू भेला गर्दछ, VA ग्लोबल कन्फ्लिक्ट र पीसबिल्डिंगको बारेमा सिक्न
नोभेम्बर 9, 2016 गतिविधि रिपोर्टहरू 0
चौथो वार्षिक राष्ट्रिय सामुदायिक कलेज पीसबिल्डिंग सेमिनार अक्टोबर २१-२4 अलेक्सान्ड्रियाको उत्तरी भर्जिनिया सामुदायिक कलेजमा आयोजित थियो। यो सेमिनार सामुदायिक कलेजहरूमा शान्ति निर्माण, द्वन्द्व समाधान, वैश्विक मुद्दाहरू, मानव अधिकार, र सम्बन्धित विषयहरूको बारेमा सिकाउन क्षमता विकास गर्न डिजाइन गरिएको थियो। यस सेमिनार भनेको कम्युनिष्ट कलेजका शिक्षकहरूको लागि मात्र राष्ट्रिय गोष्ठी हो जसले विश्व र शान्ति निर्माणका सवालहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
लिंडा ओहल्सन ग्राहम भन्छन्:
मार्च 20, 20203मा: 20 बजे
धन्यवाद ... Tytyty…
साजिद अली भन्छन्:
अक्टोबर 12, 2021 8 मा: 56 हूँ
The government of every country must give cricullicum on the peace for own comming generation
१ ट्र्याकब्याक / पिंगब्याक
Increasing Peace in Life – Des Moines Wellness